सम्पूर्ण जिन्दगीहरु ब्रम्हाण्डको कुनै कुनामा अवस्थित डेरामा घनघोर मोहजालको गुंड बनाएर यो तेरो र यो मेरो भनेर भ्रममै जिउँदछन् । जुन कुरो ऊ जन्मिनु अघिदेखि नै यस् धर्तीमा छ भने त्यो कसरी उस्को हुन सक्छ? उस्को आफ्नो भनेको ती कुराहरु मात्र हुन जुन “कथित मेरो भनिने” चीज बस्तुलाई उपयोग गरी उस्ले आफ्नै बनिबुताले सिर्जना गरेको हुन्छ । त्यो भनेको कुनै आविश्कार हुन सक्छ, कुनै दर्शन हुन सक्छ वा कुनै काब्य, कृति, संरचना हुन सक्छ । जुन यस् दुनियाँका लागि नयाँ हुनु पर्छ । त्यो कुरा इज्जत वा ब्राण्ड पनि हुन सक्छ जो बिशुद्ध उस्को नाममा आओस् ।
उदाहरणको लागि केही कसैबाट खरिद गर्दैमा त्यो चीज कहिल्यै आफ्नो हुँदैन । त्यो चीजले स्वामित्वको डेरा सारेको मात्र हो । किनभने किन्नको लागि प्रयोग भएको पैसा नै प्रथमतः मिथ्या हो । जब पैसा नै कहिल्यै आफ्नो हुँदैन भने यसबाट खरिद गरिने चीज कसरी आफ्नो हुन सक्छ? एकछिनको लागि तपाईं गोजिमा दश हजार लिएर हिंड्नुस्, केही दिन वा क्षणमै बस्तु वा सेवाको सटहीमा त्यो पैसा बाँड्दै हिंड्नु पर्छ । जस्तै त्यस्को केही हिस्सा खलासीले बुझ्छ, केही तिरोतारो गर्दा सकिन्छ । यो सत्य एउटाको लागिमात्र हैन सबैका लागि लागु हुन्छ । खलासीले पनि हामीबाट लिएको पैसा अन्ततः अरुलाई बुझाउदै हिंड्नु पर्छ । यसरी गोजिमा राम्रोसँग जम्न नपाँउदै अरुलाई दिनु पर्ने पैसा कसरी आफ्नो भन्नु?
तसर्थ किन्बेच भनेको पदार्थहरुको सटही मात्र हो र जीवनरुपी अस्तित्वले प्राणहीन पदार्थ उपर स्वामित्व ग्रहण गरेँ भनेर भन्ठान्नुँ बालुवाको घरमा बिराजमान हुनुजस्तै हो । हुरी आएपछि बालुवाको घर केही बाँकी रहदैन । यहाँ हुरीलाई मृत्युसँग तुलना गर्नुहोस् जस्को आगमनसंगै कसैको केहीको स्वामित्व बाँकी रह्दैन । बस्तु, चीज, पदार्थ वा जमिनलाई क्षणिक रुपमा चल्ती गर्न पाउदैमा त्यस्को स्थाई अधिकार उस्मा आएको हुँदैन ।
एबम् रीतले डेरा स्थाई हो भने डेरावाल स्वभावैले अस्थाई हुन् । अनि जिन्दगीहरु यहाँ एउटा डेरालाई आफ्नै सम्झेर केन्द्रबिन्दु बनाई घुमिरहन्छन् । उस्लाई त्यो डेरामा अड्याउन सहयात्री डेरावालहरुले अनेकन् अदृष्य डोरीहरुले बाँधेर राखेका हुन्छन् । जसरी बाँधेको घोडा जति उफ्रे पनि जति दौडे पनि तबेलाको वरिपरि नै हुन्छ ठीक त्यसैगरी हरेक जिन्दगीहरु डेराको वरिपरि घुम्दै एउटा जिन्दगी जिउँदछन् । यो भोगाइमा अरु सहयात्री डेरावालहरुले उस्लाई तरह तरहले साथ दिएका हुन्छन् ।
जबकी खाएको खाना समेत् वास्तवमा आफुले आँफै भित्र समाविष्ट गर्न सकिन्न भने अरु चीजको के कुरा? किनकी बिचार गर्नुहोस् हामीले खाएका चीज हामी भित्र दब्दैनन, केवल ती पदार्थहरुको स्थानान्तरण र रुपान्तरण हुने हो । धन छँउञ्जेल मेरो भनेर चढ्ने गरेको गाडी भोली निर्धन भएपछि अर्कैको भैदिन्छ । योवन छँउञ्जेल मेरो भनेको सुन्दरी पनि भोली उमेर घर्केपछी अर्काको हुन सक्छिन । बल छँउञ्जेल मेरो भनेको जागिर पनि भोली अर्काको भैदिन्छ । यसरी प्रत्येक जिन्दगीले साश्वत् चीज वा सत्यमाथि क्षणिक सम्बन्धहरु स्थापित गर्दै डेरावालको भूमिका निभाई रहेका हुन्छन् र यी डेरावालले भाडाको रुपमा सिङ्गो जिन्दगी नै सिध्याएर यस् संसारबाट कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा हुन्छन् ।
This article was published in KMG's weekly portal Saptahik on May 10, 2019 ( Baishakh 26, 2076)
तपाईंलाई डाक्टर सन्दुक रुइतले एक गाउले महिलाको जिन्दगीमा एकै दिनमा कती ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएका थिए जान्न मन छ भने पोड्कास्ट सुन्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्: